Libya: Ahiahy sy Fanantenana Noho ny Fanatonan’ireo Mpikomy an’i Tripoli · Global Voices teny Malagasy
Libya: Ahiahy sy Fanantenana Noho ny Fanatonan'ireo Mpikomy an'i Tripoli
Voadika ny 20 Aogositra 2011 12:42 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, македонски, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Tonga hananika ny renivohitra ao Tripoli ny dian'ny revolisionera Libyana, mizara ny fanantenany sy ny ahiahiny ao amin'ny Twitter ny Libyana. Indreto sombiny tamin'ireo resadresaka tamin'ny tweet androany alina.
Ghazi Gheblawi ni-tweet hoe:
@Gheblawi: Tsy azoko lavina fa miantraika amiko sy mahasosotra ahy ny fijery apokaliptika [fandravana] ataon'ny sasany amin'i #Tripoli , mba manàna finoana ary aoka hanantena fa hifarana haingana izy ity.
Mpanolotena ao amin ny tafika Libiana Afaka manao fanazaran-tena ny fampiasana fitaovam-piadiana ao an-toby ao Benghazi. Saripika Tomasz Grzyb, copyright Demotix (27/04/2011).
Tao amin'ny tweet teo aloha, nanamarika izy hoe:
@Gheblawi: Niantso ny fianakaviana ao #Tripoli minitra vitsy lasa izay, tapaka ny jiro ao amin'ny faritra misy azy ireo, tapatapaka hatramin'ny halina, mikiry mafy i dada, ambony moraly #Libya
ChangeInLibya nanampy hoe:
@ChangeInLibya: @Gheblawi mitovy amin'izany ny aty, niresaka tamin'ny reniko aho teo ka tena manahy ny amin'ny fianakaviany mihitsoka ao Tripoli izy..rabbi yester (Hamindra fo anie ny Tompo)
Ary Armchair Arab namaly hoe:
@ArmchairArab: @Gheblawi @FanovanaAoLibya Ao Tripoli koa ny ankamaron'ny fianakaviako, niantso azy ireo foana aho isaky ny alina, toa tsikaritra fa tsy manantahotra ry zareo.
Libya United nanohy ny resaka tam-panantenana.
@Libya_United: @FanovanaAoLibya @Gheblawi Tsy misy amin'ireo fianakaviana akaiky ahy niala tao Tripoli. Mba manàna fanantenana ry rahalahy. Tsy maintsy misy ny korontana saingy mino aho fa ho vetivety ihany izany
Nadia Maddox nizara fanantenana mitovy amin'izany ihany koa. Ni-tweet izy hoe:
@NadiaMaddox: @FromJoanne @Gheblawi Also have parents and other close fam in Tripoli 🙁 hope it ends soon and not too violent.
@NadiaMaddox: @FromJoanne @Gheblawi Manana ray aman-dreny sy havana akaiky ihany koa ao Tripoli 🙁 mino fa hifarana tsy ho ela izany ary tsy hisy herisetra be loatra.
Tao anatin'izany, nizara ny ahiahy maromaro i Nusaiba. Ni-tweet izy hoe:
@QdiyatnaAlhuria (Arabo: ny Fahafahana no imasoantsika): #Worstfeeling [fahatsapana ratsy indrindra] tsy mahalala izay hitranga amin'ny fianakavianareo sy ny namanareo ary tsy afaka mankany ihany koa #Tripoli #Tajoura
Mariam Addarrat feno fanantenana:
@Ummustafa78: @Gheblawi @ChangeInLibya, mpifampiraharaha 11ora foana i Gaddafi, mino aho fa handao antsika izy rehefa eo am-bavahadin'i Tripoli ny #FF .
Ary nofehezin'ny fahitalavitra Libya toy izao:
@libyatv: @Gheblawi mbola tsy fantatra ny amin'izany, saingy tsy ho ao Tripoli intsony i Gaddafi . TSY HO AO LIBYA INTSONY I GADDAFI . mazava loatra fa tsara izany!!